मुम्बई मा नौकरिहरु को लागि मानव संसाधन - सरकार - बैंकिंग र आईटी उद्घाटन
दुबई मा विदेशहरु को लागी रोजगार
मुम्बई मा नौकरी
मुम्बईमा रोजगारहरू कसरी फेला पार्ने? वास्तवमा भन्ने हो भने, हाम्रो कम्पनीसँग भारतबाट धेरै खोजी गर्नेहरू छन्। त्यसो भए यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामीले ती सबैलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं। यस समयमा हाम्रो टीमले विस्तृत जानकारी राखेको छ। छोटकरीमा रोजगार कसरी प्राप्त गर्ने मुम्बई क्षेत्रमा। हामी मुम्बईलाई दुबईमा तुलना गरौं। र यो संग दिमागमा, हामी जागिर खोजकर्ताहरूलाई सहयोग गर्न अग्रसर छौं। र जबसम्म काम खोज्नेहरू हाम्रो सुझावहरू प्रयोग गरेर। निश्चित रूपमा, मुम्बई क्षेत्रमा कार्यहरू फेला पार्नुहोस्। हाम्रो मुख्य फोकस यो मुम्बई मा नौकरी हुनेछ। र रिक्तिकाको प्रकार बीचको फरक फरक सर्वश्रेष्ठ विवरणहरूसँग तपाईंको विवरणहरू दर्ता गर्नुहोस् नौकरी साइटहरु। र कसरी पत्ता लगाउनुहोस् भारतमा क्यारियर सुरू गर्ने। अर्कोतर्फ, हामी भारतका मानिसहरूसँग हाम्रो कम्पनीमा सामेल हुन आमन्त्रित गरिरहेका छौं नयाँ अद्यावधिक कार्य प्रस्तावहरू.
त्यहाँ छ शिक्षित अधिकारीहरु को एक धेरै। र यसलाई ध्यानमा राख्दै, हाम्रो टीमले धेरै बिन्दु र लेख राख्छ। उदाहरण को लागी नौकरी साइटहरु को एक पूरी सूची मुम्बईमा। मुम्बईका रोजगारी खोज्नेहरूका लागि सुझावहरू। यसबाहेक, भारतमा सबै भन्दा राम्रो सम्भव रोजगारीको प्रस्ताव। छन् अब सबैभन्दा ठूला शहरहरूमा उपलब्ध छ जस्तै मुम्बई। हाम्रो टीमले यो लेख राख्ने आशा गर्दछ कि तपाइँलाई पर्याप्त ज्ञान दिँदैछ। मात्र तपाईंलाई काम गर्ने सम्भावना देखाउन मुम्बईमा। अर्कोतर्फ, त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्। भारतमा कार्यान्वयनका लागि मुम्बईमा राम्रो जीवन बनाउन। यसकारण हामी तल शिक्षित गर्न खोज्दै छौं।
हाम्रो भर्ती कम्पनी मुम्बई मा भर्ती छ
हामी अहिले छौं भारतबाट धेरै कम्पनीहरू भएको। र हामी भारतीय रोजगार बजारमा जानको लागि उत्सुक छौं। हाम्रो टीमले मुम्बईबाट रेजुमेहरू प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ। र मानिसहरु जो यस क्षेत्र मा आधार मा। पक्का गर्न को लागी हाम्रो कम्पनीसँग काम लिनुहोस्। किनभने नौकरी खोजीको उद्देश्यको लागि। हाम्रो भर्ती कम्पनी भारतमा शीर्ष दर्जा दिइएको छ। त्यसैले, निश्चित रूपमा नयाँ जागिर खोज्ने चाहन्छन् हाम्रो भर्ती सेवा। चूंकि हामी भारत मा भर्ती परियोजनाहरु शुरू गर्छौं। हाम्रो एचआर टीमले हाम्रो कम्पनीलाई परिवर्तन गरेको छ। उदाहरण मध्ये एक मुम्बई क्षेत्र को लागि एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय भर्ती एजेन्सी हो।
अन्तिम 20 वर्षका लागि मुम्बई महानगरीय शहरबाट। धेरै बन्नुहोस् प्रबंधन अधिकारीहरु को लागि लोकप्रिय गन्तव्य। धेरैको कारण युरोपेली र युएई कम्पनीहरूको बढती उद्योग छ। ती परिस्थितिहरूमा हामी क्यारियर शिकारी राख्छौं। हामी प्रयास गर्दैछौं एचआर व्यवस्थापन तोड्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम्पनी मा। र पक्कै पनि भारतीय संसारको व्यापारिक शहरको राजधानी। धेरै लोकप्रिय हुन्छ। यसबाहेक, प्रमुख निगमहरू। मूल्यवृद्धिको साथ लोकप्रियताको वृद्धि बढ्यो। खासगरी संसारभरबाट।
हालको समय, दुबई सिटी कम्पनी। भारतबाट जागिर खोज्ने। र हामी हो तपाईंको सीवीको पर्खँदै। साधारण रूपमा नयाँ काम खोज्नेहरू। हाम्रो वेबसाइटमा CV अपलोड गर्न सक्दछ। र मुम्बईमा नयाँ रोजगारीहरूको लागि कुर्दै। मुम्बई शहर हो निस्सन्देह कामको लागि शीर्ष। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, भारतीयहरू कामका लागि सबैभन्दा विश्वव्यापी शहर हुन्। यो शहर को एक विशाल जनसंख्या छ। यसकारण हामी हरेक दिन नयाँ रोजगारको रिक्त स्थानमा मान्छे राख्दछौँ। यो शहरमा मात्र काम राम्रो छैन। यो स्थानीयहरूको लागि जीवंत जीवनशैलीको स्वामित्व छ। अतीतमा, हाम्रो फर्मले मुम्बईमा 13 हजार हजार नौकरी खोज्ने काम गरे।
रोजगारी पाउन हामी कहाँ मद्दत गर्न सक्छौं?
सबै भन्दा बढि मुनाफा सबै भन्दा ठूलो शहरहरुमा काम खोज्छ। र सबैभन्दा अपील शहर मुम्बई हो। किनभने यो शहर छ रिक्त पदहरुको विविधता। साथै, एक जीवन एकदम राम्रो छ र उच्च स्तरमा। अनन्त संभावनाहरू छन्। विशेष गरी नौकरी खोज्नेहरूको लागि। बाट शहर को विभिन्न भाग। मुम्बईमा रोजगार पाउन। तपाईंले विविध व्यवसायिक अनुभवको व्यक्तिसँग कुरा गर्न आवश्यक छ। उच्च सामाजिक स्थितिको साथसाथै, वित्तीय र सांस्कृतिक ज्ञानको साथ। यो हुनेछ निश्चित रूपमा तपाईंलाई उचित मानव संसाधन प्रबन्धकहरूमा पुग्न मद्दत गर्दछ.
अधिकांश भागको लागि, हाम्रो टीम प्रत्येक व्यवस्थापन स्तरमा काम गर्दछ। केहि केसहरू जुन हामी यात्रा गर्न मद्दत गरिरहेका छौं। र रोजगारी खोजी गर्नेहरूको साथ मिलेर। हाम्रो कम्पनीलाई लगभग भारतीयहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय बनाउँदछ। त्यसो भए हामी यहाँ छौं विश्वका शीर्ष शहरहरूसँग मद्दत गर्नुहोस्। हाम्रो कम्पनी नौकरी खोजकर्ताहरूको विभिन्न प्रकारका साथ काम गर्दै। ताजा देखि वरिष्ठ प्रबन्धकहरु मा स्नातक। हाम्रो लागि कुनै कुरा छैन कि तपाईं कति धार्मिक हुनुहुन्छ। वा मुम्बईमा तपाईको अनुभवमा कुन अनुभव हाइलाइट गरिएको छ। हामी लगभग कुनै पनि क्यारियर खोजीकर्ता राख्नको लागि तयार छौं।
हामी मुम्बई मा काम परामर्श
त्यहाँ छन् हामीले खाली गरिरहेको धेरै खाली ठाउँहरू। विशेष गरी क्वालिटी प्रबन्धकहरूको लागि। साथै आईटी र मार्केटिंग कार्यकारीहरू। किनभने हाम्रो उद्देश्य तपाईको लागि मुम्बईमा नयाँ जीवन बनाउनु हो। हाम्रो टोलीले पनि एक्सटेट्ससँग काम गर्दैछ। र तिनीहरू मध्ये धेरै धेरै नयाँ क्यारियर दिशाहरूको लागि बाहिर चरणको लागि हेर्दै। यो दिमागमा राख्दै, हामी तिनीहरूलाई तिनीहरूका आराम क्षेत्र भित्र राख्छौं। र निश्चित रूपमा, यसले उनीहरूलाई मद्दत गर्दछ नयाँ क्यारियर उपलब्धिहरु को अनुभव.
जबसम्म तपाईं भारतमा आधार गर्नुहुन्छ। विशेषज्ञहरूको हाम्रो टोली, तपाईंलाई नयाँ भूमिकामा राख्छ। नयाँ स्तर भित्र कार्य प्रस्तावहरू। त्यसो भए तपाईं मुम्बईको साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ क्यारियर प्रगति। त्यसोभए, हाम्रो एचआर टीमले निश्चित रूपमा एक एक्सप्याट अनुभवको आश्वासन दिन्छ। र रोजगार प्रस्तावहरू जुन मुम्बईमा कहिल्यै राख्नु हुँदैन।
मुम्बईमा शीर्ष कार्यहरू तपाईंले आवेदन गर्नु पर्छ!
मुम्बई मा .1 एकाउन्टेंट नौकरी
खाता कार्यकारीको रूपमा, हरेक दिन व्यवस्थापन गर्न थुप्रै कर्तव्यहरू छन्। उदाहरणका लागि, प्रदान गर्दछ वित्तीय जानकारी। विस्तृत रिपोर्टहरू प्रबन्ध गर्दै र यसलाई प्रदान गर्नुहोस् व्यवस्थापन। यस बाहेक जब त्यो एक सुपर विस्तृत तरीकाले गरिन्छ। लेखाकार रिपोर्ट को लागी अनुसन्धान गर्नु पर्छ। र त्यसपछि लेखा डाटा विश्लेषण। र अन्तमा रिपोर्टहरू तयार गर्दै र ईमेल मार्फत पठाउनुहोस्। यो काम प्रबन्ध गर्न धेरै गाह्रो छ। किनकि यहाँ र त्यहाँ व्यक्तिले जेथा तयारी गर्नु आवश्यक छ। सधैं यकीन बनाउनु भयो कि दायित्व कम्पाइल गरिएको छ। यसबाहेक, वित्तीय जानकारी संकलन र विश्लेषण। र एकै समयमा। तपाईंले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ वित्तीय लेनदेन र कागजातहरू सँधै सहि हुन्छन्।
र प्रत्येक हप्ता, साथै पखवारा को व्यवस्थापन टोली वर्तमान वित्तीय स्थिति संक्षेप गर्न आवश्यक छ। अन्तत: पठाइएको जानकारी एकत्रित गर्न ढिलाइ बिना। यो दिमागमा साथ, प्राय: स्प्यान्समा सन्तुलन पाना तयार गर्दै। र त्यो यो काम को सबैभन्दा खराब अंश हो। किनभने तिनीहरू कहिले पनि गलत हुन सक्दैनन्। केवल लाभ र घाटा कथन को कारणले। तिनीहरू कहिले पनि गलत हुन सक्दैनन्। र निश्चित रूपमा अन्य रिपोर्टहरू समान रूपमा सिर्जना गरिएको छ।
मुम्बई मा .2 बैक ओफिस जॉब्स
पछाडि अफिस रोजगारहरू रोजगारको अर्को प्रकार हो। त्यसोभए, यदि तपाईं कसैसँग कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यस प्रकारको क्यारियरको बारेमा। तपाई धेरै अनुभव व्यापार अधिकारीहरु संग कुरा गर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि अगाडि कार्यालय प्रबन्धकहरूमा। किनभने हुन सक्छ तपाईंको लागि केही सुझावहरू छन्। सब भन्दा लोकप्रिय एक व्यवस्थापक रोजगार अपरेशनहरू साथै डाटा प्रविष्टि स्थिति सहित फ्रन्ट अफिस हो। त्यहाँ फ्रेशर्सको लागि धेरै खाली ठाउँहरू पनि छन् ब्याक अफिस अपरेशन्समा एक रिसेप्शनिस्ट र ग्राहक सेवा समन्वयको रूपमा।
मुम्बई शहर मा फिर्ता कार्यालय क्यारियर। सामान्यतया यो ठूलो कर्पोरेसनको क्षेत्र बाट बनिएको हो। र नकारात्मक पक्ष मा, यस प्रकारको कामले राजस्व उत्पन्न गर्दैन। बाटोमा कम्पनीले यो काममा देख्दै। र यो स्थिति व्यवसाय मालिकहरू वा वरिष्ठ व्यवस्थापकहरूको लागि दृश्यात्मक छैन। अर्कोतर्फ, धेरै महत्त्वपूर्ण समर्थन र प्रशासन प्रदान गर्नुहोस्। विशेष गरी वरिष्ठ कार्यालय प्रशासनहरूको लागि। मुम्बईमा फिर्ता अफिस क्यारियरमा धेरै भूमिका हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, एक व्यक्ति सक्नुहुन्छ सूचना प्रविधि जस्तै विभागहरुमा काम गर्नुहोस्। कम्पनी सञ्चालन। साथै मानव संसाधन, लेखांकन र अनुपालन।
No .3 बैंक को मुम्बई मा
बैंकिंग मा मुम्बई को बैंकिंग। निश्चित हुन सक्छ नयाँ नौकरी खोजकर्ताहरूको लागि सम्भव छ। हाम्रो टीम मुनि माथि शीर्ष 10 बैंकहरू पोष्ट गरिएको छ। तथ्यको कुराको रूपमा, तपाईंले गतिशील बैंकबाट सुरू गर्नुपर्दछ। अर्कोतर्फ, तपाइँको कार्यस्थलसँग काम गर्न एक उत्साहित टीमको विकास गर्न आवश्यक छ। र भारतीय रोजगार खोजी गर्नेहरूको ठूलो सम्भावना छ। किनभने भारतीय वित्तीय कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेका छन्। त्यसैले, जब सम्म तपाईं एक कर्मचारी हुनुहोस्। बैंकले सम्भवतः दुबईमा तपाईलाई एक्स्प्याटको रूपमा पठाउन सक्दछ। वा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडा सम्म पनि। अर्कोतर्फ, भारतीय पेशेवर कामदारहरू। आफ्नै क्यारियरको लागि दर्शन पूरा गर्न कटिबद्ध हुनुहुन्छ। र अवश्य पनि, रोजगार सुरु गर्नुहोस् संग विश्वव्यापी भारतीय बैंक.
बैंकिंग व्यवसाय दर्शन सधैँ बलियो मानहरूमा आधारित हुन्छ। एक उदाहरणहरू उत्कृष्ट उत्कृष्टता हो। यसबाहेक, क्रस बिक्रीको साथ उत्तम ग्राहक फोकस। सकारात्मक पक्षमा, मानिसहरूलाई बैंकि product उत्पादन सकारात्मक पक्षहरू देखाउँदै। र निश्चित रूपमा बैंकिंग क्यारियरको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेतृत्व हो। उदाहरण को लागी, मानिस रचनात्मकता र दैनिक कार्यको प्रबन्धन साथसाथै स्थिरताका साथ। त्यसो भए हाम्रो कम्पनी यस कारणले छ तपाईंलाई सहयोग पुर्याउन सहयोग पुर्यायो। र यो संग दिमाग मा, आफ्नो ज्ञान को विकास। यसबाहेक, भारतीय बैंकिंग उद्योगमा उत्कृष्ट व्यक्तिहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र राख्ने। मुम्बईमा बैंकिङ कार्यका लागि तल हेर्नु भएको छ।
शीर्ष 10 बैंक क्यारियर वेबसाइटहरु:
क्यारियर स्टेट बैंक
HDFC बैंक खालीता
आईसीआईसीआई बैंक क्यारियर
पंजाब नेशनल बैंक भर्ती वेबसाइट
एक्सिस बैंक क्यारियर वेबसाइट
क्यानाडा बैंकसँग क्यारियर
बैंकको बडोडा नौकरिहरु अवसर
युनियन बैंक भर्ती
आईडीबीआई बैंक मा नौकरी
बैंक अफ इंडिया क्यारियर वेबसाइट
मुम्बई मा .4 डेटा प्रविष्टि नौकरिहरु
डाटा प्रवेश कार्यहरू, सामान्यतया बोल्दै, भारतीयहरुको लागि क्यारियरको अर्को प्रकारको संभावना। हाम्रो कम्पनी, अर्कोतर्फ, यस प्रकारको रोजगार हाम्रो सूचीमा थपियो। डाटा प्रविष्टि स्थिति सामान्यतया कम्पनी भित्र कार्यरत स्टाफ को एक सदस्य बोल्छ। अवश्य पनि, सुरुमा यो निकै बोरि job काम हो। मुख्य उत्तरदायित्व भनेको कम्प्युटर प्रणालीमा डाटा प्रविष्ट गर्नु वा अपडेट गर्नु हो। त्यसोभए सुनिश्चित गर्दै यो अद्यावधिक गरी सही ढ placed्गले राखिएको छ। सामान्यतया बोल्दै, डाटा प्रबन्धकहरूद्वारा प्रदान गरिएको। धेरै जसो केसहरुमा एक कम्प्युटरमा प्रवेश गरीएको हुन्छ। र 90% कागज कागजातबाट आउँदै। साथै बोर्डहरूमा ईमेल र रिपोर्टहरू। त्यसो भए, यो कम कुशल श्रमिकों को लागि एकदम सही अवसर हो। साथै, अस्थायी कर्मचारीले यो दैनिक कार्यको रूपमा गर्न सक्षम छ।
नौकरी खोजकर्ताहरु लाई विशेष गरी एक क्यारियरको सुरुवातमा। आधारभूत स्थितिमा डाटा प्रविष्टि कार्यहरूको साथ सुरू गर्दै। र किबोर्ड प्रयोग गरेर जुन दैनिक दिनचर्या हुनेछ। नकारात्मक पक्षमा, त्यहाँ अप्टिकल स्क्यानर छ जुन डाटा रेकर्डरहरू राख्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। पहिलो छ महिनामा स्थिति धेरै प्रयास ले। र निश्चय नयाँ भर्खरै स्नातक विद्यार्थीहरूले यो स्थिति एकदम बोरिंग पाइरहेका छन्। त्यसो भए, हाम्रो टोलीले भारतमा नयाँ रोजगारको लागि सँधै सल्लाह दिन्छ। तर यो काम भर्खरको स्नातक विद्यार्थीहरूको लागि मात्र थपिनु पर्छ। किनभने राम्रो अनुभव भएको व्यक्तिले यसलाई व्यवहार गर्न एकदम गाह्रो भएको भन्न सक्छ। र जिम्मेवारी यो कम छ। सबैको रूपमा राम्रो कम्पनी संरचनाको लागी सेट अप गर्नु पर्छ।
मुम्बई मा .5 सरकारी नौकरिहरु
पाँचौंमा, हामीसँग मुम्बईमा सरकारी रोजगारहरू छन्। यस प्रकारको रोजगार हो अधिकतर अनुभवी अधिकारीहरु को लागी। अर्कोतर्फ, पछिल्लो फेला पार्दै मुम्बईमा सरकारी कार्यहरू। कठिन कार्यहरू हुन सक्छ। सकारात्मक पक्षमा, त्यहाँ 10th पास / 12th पास ग्रेडको लागि रोजगार प्रस्तावहरू छन्। थप, करियर अवसरहरू एक दीर्घ-अवधि अवसरको लागि राम्रो हो। नतिजाको रूपमा, आईटी सफ्टवेयर विशेषज्ञ को लागी दीर्घकालीन करार को लागी आवश्यक छ। भारतीय ईन्जिनियरिङ्को रूपमा सरकारी प्रस्ताव कार्य रिक्तिकाहरू साथै राजनैतिक अधिकारीहरू। त्यसोभए, ती परिस्थितिहरूमा, नौकरी खोजकर्ताहरूले सरकारी वर्गहरूमा थुप्रै जागिरहरू रोज्न सक्छन्।
हाम्रो कम्पनी वेबसाइटले सरकारी कार्य पृष्ठहरूको बारेमा पनि लेखेको छ। र यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी मुम्बईका सबै जागिर खोज्नेहरूको लागि एक गाईडको लागि उत्सुक छौं। सामान्यतया, सधैं को रूप मा, उम्मेदवारहरूको लागि हाम्रो टोली भेला स्रोत। यसबाहेक, हाम्रो प्रयोगकर्ताहरू दिनहुँ यस प्रकारको रोजगारीको खोजीमा छन्। जब सम्म मान्छे हाम्रो नौकरी साइट को उपयोग गरेर। निश्चित रूपमा मुम्बईमा सरकारी रोजगार को बारे मा जानकारी को एक महत्वपूर्ण स्रोत खोज्नुहोस्। तथ्यको रूपमा, हामी पनि रोजगार खोजी गर्नेहरूको खोजी गरिरहेका छौं। सरकारी क्षेत्र महाराष्ट्रमा नयाँ उद्घाटनका लागि। त्यहाँ ठूलो सम्भावना छ। केन्द्रीय सरकारको कामउदाहरण को लागी, UPSC र SSC अग्रभूमि मा बढ्दै छन्। नयाँ अवसरहरू बढ्दै छन् हरेक दिन। र पृष्ठभूमिमा राज्य सरकारका कर्मचारीहरूले केपीसीसी र एमपीपीएससीसँग। दुवै हो भारतमा निराशाजनक उम्मेद्वारहरूको लागि भाडा तयार.
के तिनीहरू सरकारी क्यारियर र यसको योग्यता हुन्?
ठिक छ यदि हामी मानक रोजगार प्रस्तावहरु लिन्छौं। सरकारी रोजगार कुनै पनि बिन्दुमा पाउन लायक छ। हाम्रो जागिर साइट भर्ती उद्देश्यको लागि सबै भन्दा राम्रो प्रयोग हो। विशेष गरी भर्खरको भर्ती सरकारी कामहरूको लागि स्मार्ट स्टप। हाम्रो टीम भारत भित्र विभिन्न उद्योग र क्षेत्रहरु मा छ। त्यसो भए सबैभन्दा उत्तम भुक्तानी पाउनुहोस् मुम्बईमा सरकारी रोजगार। सरकारी संगठनमा निश्चित रूपमा काम गर्दै, यो प्रबन्ध गर्न लायक छ। नयाँ रोजगार भएदेखि यो सुरू गरिनेछ। एक सरकारी संगठन भित्र। तपाईको व्यक्तिगत स्थिति सुरु भएको छ उठ्न र प्रतिष्ठा स्तर बढ्नेछ.
उम्मेदवारहरूको लागि धेरै मुम्बई सरकारको रोजगार अवसरहरू छन्। सामान्यतया, बिभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमिहरूले मानिसहरूलाई रोजगार पाउन मद्दत पुर्‍याउँछन्। भारतीय सेना वा कन्ट्र्याक्टर कम्पनीहरूमा समेत काम गर्दा पनि यस किसिमको रोजगार प्रस्ताव आउन सक्छ। सकारात्मक पक्षमा, यी सरकारी रोजगार को मुख्य सकारात्मकता ठूलो छ। उदाहरण को लागी, धेरै को रोजगारले उच्च तलब भुक्तानी समावेश गर्न प्रस्ताव गर्दछ। जहिले पनि कुनै समयमा कुनै ढिलाइ हुँदैन। सिम्पोजियमहरू र प्रशिक्षणको बेला नि: शुल्क प्रशिक्षण र बस्ने ठाउँ। नकारात्मक पक्षमा, काममा कम लचकता। तर मुख्य पक्ष होaसही काम सुरक्षा र सेवानिवृत्ति पछि सुविधा। अनि निश्चित समय पछि राम्रो पेंशनको लागि। अधिकतर अवस्थामा, यो 25 वर्ष सम्म सेवानिवृत्ति सम्म पुग्छ।
प्राप्त गर्न सरकारी क्यारियर र रिक्तिकाहरू टाइप गर्नुहोस्?
सामान्यतया भन्नुपर्दा, मुम्बई शहरका अधिकांश सरकारी कामहरू राम्रो तलबमा छन्। प्राय: रोजगार खाली स्थानहरू निजी रोजगारको तुलनामा धेरै तिर्ने। यी अंकहरू दिइएमा, सबैभन्दा बढी भुक्तान गरिएको सरकारी प्रस्तावहरू प्राप्त गर्दै। खास गरी मुम्बईमा निकै गाह्रो तर असम्भव छैन जस्तो देखिन्छ। उदाहरण को लागी, हामी तल धेरै सरकारी रोजगारहरु राखेका छौं।
सिविल सेवा अधिकारीहरूको रूपमा काम गर्दै
राज्य सार्वजनिक सेवा आयोग
एयर इंडिया केमिकल्स कार्यकर्ता
उर्वरकको रूपमा कार्यकारी लि
मुम्बई विश्वविद्यालय एक प्रोफेसर को रूप मा
सरकारी व्याख्याता वा सरकारी वैज्ञानिक
रक्षा सेवा जस्तै सेना, नौसेना र तटीय गार्ड
भारतीय रेलमार्ग मैनुअल कार्यकर्ता
बैंकिंग बीमा विशेषज्ञ
भारतीय सरकारका डाक्टरहरू र नर्सहरू
यद्यपि, राम्रो भुक्तान गरिएको रोजगार प्याकेज संयोग होइन। Newbies ले उनीहरूको हात लिनु पर्छ र ज्याला कमाउनु पर्छ। सामान्यतया, भारतीय उच्च शिक्षित व्यक्तिहरूका बीचमा राम्रो सामाजिक स्थिति कमाउनको लागि। नयाँ व्यक्तिले सफलतापूर्वक धेरै पाठ्यक्रम र प्रशिक्षण पूरा गर्नु पर्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, तीमध्ये धेरै तपाईंले आशा गर्न सक्नुहुने भन्दा कडा हुन्छन्। विशेष गरी सुरुमा लाखौं अनुभवको साथ। नयाँ कार्यकर्ताहरु हरेक वर्ष प्रवेश परीक्षा लिन नेतृत्व गर्न सक्छ। मुम्बईमा एक सफल सरकारी कर्मचारी हुन। एक व्यक्ति हुनु पर्छ यस प्रकारका रिक्त पदहरूको लागि तयारी सुरू गर्नुहोस् केही वर्ष पहिले।
नम्बर। एनएनएनएक्सएक्स एचआर क्यारियर मुम्बई मा
मानव संसाधन विशेषज्ञको रूपमा। प्रत्येक कम्पनीमा तपाईसँग अगाडि जानको लागि प्रशस्त ठाउँ हुनेछ। थप, यो रिक्त स्थानको आफ्नै अनुपम संस्कृति छ। किनकि यो मानवसँग मानवसँग काम गर्दैछ। यो दिमागमा साथ, कुरा गरीरहेको अनुहार कुरा गर्न को लागी स्मार्ट विचार जस्तै seams। किनभने तपाईं अन्तर्वार्ता व्यक्तिको मानहरू समेट्न सक्नुहुन्छ। साथै यो सुनिश्चित गर्नु कि दर्शनहरू आदर्श र आदर्शहरूसँग तुलना गरिएको छ। विशेष गरी कम्पनी भित्र व्यवस्थापन स्थितिको लागि। रोजगार पत्र जारी गर्नु अघि। व्यक्तिलाई भविष्य कर्मचारीको काम गर्ने भाषा जाँच गर्न आवश्यक छ। किनभने यो केहि व्यापारिक निर्देशन पछ्याउनु पर्छ।
सकारात्मक पक्षमा, केहि कम्पनीहरूसँग प्रणाली र बानीहरू छन्। र यो दिमागमा, समान विचार साझा गर्ने मानिसहरूको समूहले काम गर्न सक्दछ। यस स्थितिमा काम गर्दा मुख्य चीजहरू मध्ये एक। पक्कै छ राम्रो मानव संसाधन कर्मचारीलाई विकास गर्नुहोस्। कुनैपनि समयमा, नयाँ प्रबन्धकहरूले सम्पूर्ण कम्पनीको संस्कृतिलाई विकास र प्रबन्ध गर्दछ। मुम्बई मा मानव अधिकारियों को नयाँ अधिकारियों को नयाँ भारतीयों को भर्ती भर्ती। साथै केहि अवस्थाहरूमा फायदा र पेरोल राख्नुहोस्।
अर्कोतर्फ, द्वन्द्वको बीचमा मध्यस्थता गर्नुहोस् र प्रशिक्षण र विकासमा संलग्न हुनुहोस्। विशेष गरी भारतमा प्रबन्ध गर्न सजिलो काम होइन। तर मानव संसाधन भूमिका कम्पनीको सफलताको मूल हो। र यो के हुनेछ केहि फरक पर्दैन। कम्पनी मा नयाँ व्यक्तिहरु लाई काममा लिन जिम्मेवार व्यक्ति। निश्चित रूपमा, को एक कडा प्रभाव छ कम्पनी भविष्यको दृष्टि र विकास.
मुख्य के हो? जिम्मेवारी मानव संसाधन विशेषज्ञहरु?
मानव संसाधन / मानव संसाधन व्यक्ति / विशेषज्ञहरू वा व्यवस्थापन स्थानहरू छन्। र हो, सब भन्दा जिम्मेवार कार्यहरू भर्ती गर्नु र सीभी स्क्रिनिंग हो। सँधै पक्का गर्दै कि पृष्ठभूमि जाँच भइसकेको छ। त्यसो भए साक्षात्कार र सम्भावित कार्यकर्ताहरू राख्ने। अर्कोतर्फ, यदि कम्पनीले प्रबन्धकहरूलाई भर्ती गर्दैछ। मानव संसाधन कार्यकारीले सधैं अतिरिक्त प्रतिक्रिया दिँदै। यसबाहेक, सधैँ सुनिश्चित गर्नुहोस् भविष्यका प्रबन्धकहरूले प्रशिक्षण पछ्याउनेछन्। मानव विशेषज्ञहरू/ व्यक्ति जिम्मेवार। निश्चित रूपमा, विकासको एक क्षेत्रमा फोकस गर्न को लागी।
उदाहरण को लागी, भर्ती र प्रशिक्षण। सामान्यतया, यो ह्यान्डल गर्न केवल न्यूनतम आवश्यकताहरू हुन्छन्। विशेष गरी मुम्बई जस्ता ठुलो शहरमा। त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरू छन् र कार्यहरू जुन सकेसम्म चाँडो गरिनु पर्छ। मुम्बई शहर मा साना कम्पनिहरु। सामान्यतया एक वा दुई हुनेछ एचआर प्रबन्धक वा कर्मचारी। अर्कोतर्फ, ठूला कम्पनीहरूसँग धेरै एचआर कार्यकारीहरू छन्। र यसलाई विशेष क्षेत्रहरू र सेवाहरूसँग सम्पन्न गर्ने प्रयास गर्दै। त्यसोभए, यथार्थमा यो तपाइँमा निर्भर छ यदि तपाईं एक संगठन को प्रशासनिक कार्य समन्वय गर्न चाहानुहुन्छ। एक वरिष्ठ कार्यकारीको रूपमा आफैलाई द्वारा। वा केहि मद्दतले ठूलो कम्पनीको प्रबन्ध गर्दै।
आईटी क्षेत्र मुम्बई मा .7 रोजगार
यो मुम्बईमा आईटी रोजगारी। त्यसो भए, IT IT रिक्त पदहरूको साथ सुरू गरौं। पछि तपाईं भारतमा यस्तो प्रकारको रोजगारी सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईं एक विशाल कर्पोरेट मेसिनमा सूचना प्रविधि संरचनाको अंश हुनुहुनेछ। अर्कोतर्फ, कम्प्युटर विशेषज्ञका लागि भारतमा विशाल सम्भावनाहरू छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने, शीर्ष कम्पनीहरू भारतमा आधारित। हरेक महिना, दिन र हप्ता IT विशेषज्ञको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए, यदि तपाइँ प्राविधिक समर्थन रिक्त पदहरूमा काम गर्नुभयो। मुम्बईमा आईटी रोजगार भित्रको रोजगारले तपाईंको लागि काम गर्नुपर्छ।
त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्। नयाँ कार्यमा फ्रेसरको रूपमा सुरू गर्दै वा मददडेस अपरेटरको रूपमा। धेरै सुरूमा तपाईको लागि राम्रो कामको खाली हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईसँग पर्याप्त अनुभव छ भने। तपाईं विभिन्न क्षेत्रहरूमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, कम्प्युटर प्रणालीहरू निगरानी र रखरखाव। एउटा उदाहरण लिनक्स प्रणाली हो साथै नेटवर्क र सर्भरहरू सिर्जना गर्दै। यसबाहेक, सञ्जालहरू राम्रो काम गर्ने निश्चित गर्नुहोस्। विशेष गरी संगठनमा एक कार्यालय भित्र।
व्यस्त क्षेत्रहरू अगाडिको लाइन हो। किनभने हरेक समय आईटी इन्जिनियरिङले नयाँ वा अवस्थित ग्राहकहरूको साथ सीधा व्यवहार गर्न आवश्यक छ। र वास्तविकतामा, तिनीहरूमध्ये धेरै, समस्याको बारेमा पर्याप्त ज्ञान छैन। अनि निश्चित रूपमा, तिनीहरूसँग प्राविधिक समस्याहरू छन्। प्राय: साधारण गल्तीहरू पासवर्डहरू बिर्सिएका छन्, फाईलहरू अपलोड गर्न वा इ-मेल समस्याहरू। यो नहुन सक्छ सर्वोत्तम भुक्तानी क्यारियर। विशेष गरी सुरुमा। तर एक लामो अवधिमा, धेरै वर्ष भित्र। मुम्बईमा उचित आईटी प्रबन्धकले राम्रो पैसा कमाउनेछ।
मुम्बईमा एक नौकरी प्राप्त गर्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
मुम्बईमा शीर्ष नौकरी साइटहरु
यस खण्डमा, नौकरी खोजकर्ताहरू निश्चित रूपमा रोचक जानकारी पत्ता लगाउँछन्। तिनीहरूमध्ये एउटा हो उत्तम क्यारियर वेबसाइटहरु। जहाँ रोजगारी खोज्नेहरूले सम्भावित रोजगारदाताहरू फेला पार्दछन्। अपडेट गरिएको जानकारीको लागि तिनीहरूको विवरणहरू दर्ता गर्नुहोस्। र पृष्ठभूमिमा, काम खोज्नेहरूले कामको अलर्टका लागि आफ्नो प्रोफाइल दर्ता गर्नुपर्दछ। सामेल हुनको लागि केहि साधारण ईमेल आमन्त्रणहरू पनि मद्दत गर्न सक्दछन्। किनभने कसैलाई थाहा छैन जब सम्भावित रोजगार प्रस्ताव उपलब्ध हुन्छ।
नहीं .1 मुम्बई मा नौकरी गल्फ नौकरिहरु
भारतमा नाक्री गल्फ। भारतबाट सबै भन्दा राम्रो रोजगारी साइटहरू। यस समय स्थानीय नौकरी चाहनेहरूको लागि उत्तम को एक। र साथ अन्तर्राष्ट्रिय विदेशियहरुमा विपणन अनुभव संग। धेरै मानिसहरू जो सामेल हुन तयार हुन्छन्। निश्चित रूपमा मुम्बईमा रोचक कार्य प्रस्तावहरू पाउनेछन्। फिलहाल, कम्पनीले विभिन्न बिभिन्न क्षेत्रहरू प्रस्ताव गरेको छ। यसबाहेक, मुम्बईमा काम गर्ने शीर्ष कम्पनीहरूको सूची।
मुम्बईको एक करियरको लागि .2 ओल्क्स
अर्को भारतीय नौकरी तलाशने वाला पोर्टल। यो बेलायत भारत हो। संग ओल्क्स मुम्बई साथै ओल्क्स दिल्ली। र अर्कोतर्फ, समेत ओल्क्स पुणे एक नौकरी प्राप्त गर्न मद्दत गर्नु पर्छ. त्यसोभए, यो मनमा, नयाँ आगन्तुकहरुलाई सूचित गर्न आवश्यक छ। किनकी एक को लागि एक नि: शुल्क स्थानीय वर्गीकरण साइट हो। यसबाहेक, धेरै चोटि कम्पनीहरूले उनीहरूको साथ अफगानिस्तानमा रोजगार प्रदान गर्दछ। अर्कोतर्फ, मानिसहरूले खरीद र बिक्री सुरु गर्छन्। सजिलो तरिकामा व्यक्तिगत वस्तुहरू। तर रोजगारीको कम्पनीमा नयाँ जागिरहरू उपलब्ध छन्।
No .3 Quikr नौकरी जोडें
द्रुत यो भारतीयको लागि हो। यो दिमागमा रोजगार खोजी गर्नेहरू पनि। तिनीहरूको प्रोफाइल पोष्ट गर्दै। मुम्बईमा रोजगार पाउने आशा गर्दै। मार्केटिंगको साथ टेलिसेल्स, रिसेप्शनिस्ट र आईटीबाट। रोजगार को सबै प्रस्तावहरु छन्। र नयाँ रोजगार प्रस्तावहरू विभिन्न शहरहरूबाट आएका छन्। सम्पूर्ण भारत र उपनगरहरूमा एमबीए योग्यता संग.
नम्बर4साँच्चै नौकरी बोर्ड
वास्तवमा, तथ्यको रूपमा, मुम्बईमा पनि भर्ती छ। र छ एक राम्रो काम खोज को एक संसारमा ईन्जिनहरू। त्यसो भए, यदि तपाईं मुम्बईमा क्यारियर खोज्दै हुनुहुन्छ। निश्चित रूपमा, तल हेर्नुहोस्। सामान्यतया, यो एक हो सर्वश्रेष्ठ काम गर्ने रोजगार साइटहरू र पाकिस्तानीका लागि गाईडहरू र भारत। त्यसो भए वास्तवमा मुम्बई यो कभर गरिएको छ।
No .5 कार्यभारिया नौकरी पोर्टल
वास्तवमा भारतको काम, तथ्यको रूपमा, भारतको कम्पनीमा काम सर्वोत्तम छ। जागिर खोज्नेहरू सक्षम छन् रोचक कार्य प्रस्तावहरू खोज्न। साथै अग्रभूमिमा, त्यहाँ साक्षात्कार सुझावहरू धेरै छन्। त्यहाँ धेरै रुचाउने कामकाजहरू पनि छन्। साथै स्थान प्रणालीमा स्थान। त्यसोभए, हामी वास्तवमा छौं काम गर्ने चाहनाहरू अगाडि बढ्न जान्छ यस कम्पनीको साथ। र पोस्ट प्रस्तावहरू अद्यावधिक गर्न पुनः सुरू गर्नुहोस्।
नम्बर6दानव नौकरी बोर्ड
राक्षस भारत एक प्रसिद्ध एक। र सबै भन्दा पुरानो जागिर बोर्ड। र यो भारतीय नौकरी खोजकर्ताहरूको लागि नौकरी साइट हो। Monster.com क्यारियर र भर्ती संसाधन प्रदान गर्नुहोस्। निश्चयपूर्वक व्यवस्थापकहरू भाँडामा लिन र निर्देशकहरू भाँडामा पुर्‍याउन प्रासंगिक प्रोफाइलहरू प्रदान गर्दछ। हामी विश्वास गर्दछौं कि उनीहरूसंग प्रासंगिक रोजगारहरू छन्। उदाहरणका लागि मुम्बईका साथसाथै दिल्ली पनि बंगलोरसँग र दोहा। यसबाहेक, तिनीहरू चेन्नई, पुणे र कोलकातामा काम गरिरहेका छन्।
No .7 Mumbai Jobs with Glassdoor
गोरखापत्र साँच्चै शीर्ष एक्सएनएमएक्स कम्पनीहरूमा छ। वास्तवमा, तपाईं मुम्बईमा काम खोज्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया बोल्दै सही रोजगार मुम्बईमा। यस कम्पनीको साथ समस्या हुनु हुँदैन। हालको समय Glass Glass फर्म को कारण, मूल्याङ्कन र वेतन को लागि मार्गदर्शन। र नयाँ रोजगारी प्रस्ताव मुम्बई जस्तै शहरहरु संग खोलिएको छ। त्यसोभए, तिनीहरूसँग साथ काम गर्न पनि प्रयास गर्नुहोस्।
No .8 Shine.com संग 18k नौकरिहरु मा छ
त्यहाँ मुम्बईमा 18,000 सक्रिय कार्यहरू छन्। यस नौकरी साइट भित्र कम्पनी र प्रत्यक्ष भर्ती। निश्चित छ, छ नयाँ रिक्तियों को एक धेरै मुम्बईमा। त्यसैले, तपाईंले भर्खरको रोजगारी प्रस्तावहरू जाँच गर्नुपर्छ। यसबाहेक, तपाईंको विवरणहरू विभिन्न प्रकारका क्षेत्रहरूसँग दर्ता गर्नुहोस्। किनकि मुम्बई भर कि धेरै नौकरिहरु संग। यो कम्पनीले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ एयरपोर्टमा धेरै राम्रो शीर्ष रेटेड रेटेड कार्यहरू खाली छ। यसबाहेक, यो फर्मले रोजगारी खोजकर्ताहरूको लागि निःशुल्क सतर्कता प्रदान गर्दछ।
No .9 Jobs in Mumbai with Freshers World
त्यहाँ पनि छन् रोजगारीका लागि तालिम प्रदान गर्दछ मुम्बईमा। र जो लोग ताजा स्नातकोत्तर प्राप्त गर्न सक्छन् यस कम्पनी संग रोजगारी मा रुचि को खोज निश्चित गर्न सक्छन्। त्यसोभए, यो मनमा, एक नजरको प्रयास गर्नुहोस्। यसका साथै सङ्ग्रहका लागि भित्री भाग त्यहाँ धेरै छ यस नौकरी साइट मा नौकरी खोजकर्ताहरु को लागि स्थानहरु.
No .10 Jobs in Mumbai with Randstad
रेडस्टेड कम्पनी निश्चित रूपमा तपाईंलाई प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ मुम्बई मा नौकरी किनभने त्यहाँ यो कम्पनीको लागि अफरहरू प्रस्तावहरू छन्। यस कम्पनीको साथ, तपाईले धेरै कार्य प्रस्तावहरू पाउन सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी परियोजना प्रबंधन र वित्त को लागी। अर्कोतर्फ, ईन्जिनियरिङ संग तेल र ग्याँस। त्यसोभए, यो एक नजर राख्नको लागि साँच्चै लायक छ र एक अद्यावधिक पुनः सुरुवात पठाउनुहोस्।
मुम्बईको करियरमा रुचि छैन?
दुबईमा रोजगारी सुरु गर्नुहोस्
दुबई र मुम्बईबीच के फरक छ?
मुम्बई भारतीय महानगर हो। अर्कोतर्फ, दुबई एक अरबी संस्कृति आइकन हो। र यसबाट यी दुई शहरहरू आफैंबाट टाढा बस्छन्। अर्कोतर्फ मुम्बई, केहि राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकाका धेरै कम्पनीहरूले आफ्ना कार्यालयहरू मुम्बई शहरमा राखेका छन्। तर दुबईमा, त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन् अरबी निगमहरूका लागि।
त्यसोभए, यदि हामी केवल त्यो आधारमा आधारित छ। त्यहाँ एकदम ठूलो भिन्नता छ। यी दुई शहरहरूमा आधारित। लागि उदाहरण दुबई सिटी। एक्सटेट्सका लागि बढी अधिक अभिमुख छ। साथै नयाँ आगन्तुकहरू। त्यसैले, भारतका मानिसहरू हुन् यूएईमा पुग्न खोज्दै। सकारात्मक पक्ष मा, तिनीहरूलाई धेरै राखिन्छ। तर ती मध्ये केही मुम्बई फर्के। को लागत दुबईमा बस्ने यदि हामी मुम्बईसँग तुलना गर्यौं भने धेरै उच्च छ। थप आवास र बसोबासको लागत। युएईमा धेरै उच्च छन्। विशेष गरी नयाँ जीवनको सुरुमा.
मुम्बई शीर्ष भारतको बढ्दो विश्वव्यापी शहर हो। अर्कोतर्फ, यो ठाउँमा फरक स्तर आय जनसंख्या छ। साथ ही मुम्बई मा, त्यहाँ सांस्कृतिक स्थानहरू छन्। अर्कोतिर, विगत 20 वर्षहरूमा। मुम्बई शहरले एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रमा परिवर्तन गरेको छ। र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यहाँ हिँडिरहेका छन्। किनकि यो स्थान व्यापारको लागि फ्याँकिएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र धमाधम उद्योगहरूको आक्रोशको साथ, अन्तर्राष्ट्रियमा प्रवेश गर्दै व्यापार विश्व र एक्सप्याट्सको साथ बढेको लोकप्रियतामा अग्रणी।
दुबई शहर कम्पनी अब दुबई मा रोजगार को लागी राम्रो गाइड प्रदान गर्दछ। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो Dubai दुबई। त्यसो भए, यो दिमागमा राखेर, अब तपाइँ गाइडहरू, सुझावहरू र रोजगार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ संयुक्त अरब अमीरातमा तपाईंको आफ्नै भाषाको साथ।